Yini i-Pip ku-Forex - Yazi konke mayelana nama-Pips ku-Forex Ukuhweba
Imfundo - Imibhalo nezifundo - izihloko ezisekelwe ngaphambili - Iyini i-Pip ku-Forex?
Uma unentshisekelo nge-forex futhi ufunde izindatshana zokuhlaziya nezindaba, kungenzeka ukuthi uthole iphuzu noma iphoyinti. Lokhu kungenxa yokuthi i-pip yigama elivamile ekuhwebeni kwe forex. Kepha kuyini iphuzu nephuzu ku-Forex?
Kulesi sihloko, sizophendula umbuzo wokuthi yini ipipi emakethe ye-forex nokuthi lo mqondo usetshenziswa kanjani ku Forex ukuhweba. Ngakho-ke, funda nje le ndatshana ukuthola ukuthi yini ama-pips e-forex.
Ayini ama-pips ku-Forex Ukuhweba?
Ama-pips ushintsho oluncane ekuhambeni kwamanani. Simply, le iyunithi ejwayelekile yokulinganisa ukuthi izinga lokushintshanisa selishintshe kunani.
Ekuqaleni, i-pip yakhombisa ushintsho oluncane lapho intengo ye-Forex ihamba khona. Noma, ngokuvela kwezindlela zamanani ezinembile kakhudlwana, le ncazelo yokuqala ayisasebenzi. Ngokwesiko, amanani ama-Forex acashunwe ezindaweni ezine zamanani. Ekuqaleni, ushintsho oluncane lwentengo ngokwendawo yesine yamanani ibizwa ngokuthi yi-pip.
Ihlala iyisilinganiso esilinganisiwe sabo bonke ababhulokhi futhi Amapulatifomu, okwenza kube wusizo kakhulu njengesilinganiso esivumela abathengisi ukuthi bakhulume ngaphandle kokudideka. Ngaphandle kwencazelo enjalo, kunengozi yokuqhathaniswa okungalungile uma kukhulunywa ngamagama ajwayelekile afana namaphuzu noma imikhaza.
Malini i-Pip eyodwa ku-Forex?
Abathengisi abaningi babuza lo mbuzo olandelayo:
Malini ipayipi elilodwa nokuthi ulibala kanjani kahle?
Kwabaningi currency ngazimbili, ipayipi elilodwa ukunyakaza kwendawo yesine yendawo. Okuhlukile okuphawuleka kakhulu ngabhangqa be-forex abahlotshaniswa neJen yaseJapan. Kwababili be-JPY, ipayipi elilodwa ukunyakaza endaweni yesibili yendawo.
Ithebula elilandelayo libonisa amanani we-forex kwamanye amabala wemali ejwayelekile ukuqonda ukuthi yini ku-Forex elingana:
Inani lamapayipi e-Forex (1 inkatho)
Ukuqhathanisa inani lamapayipi lamabili we-forex
Ngokushintsha kwepayipi elilodwa esikhundleni sakho, ungaphendula umbuzo wokuthi kubiza malini ipayipi. Ake sithi ufuna ukuhweba nge-EUR / USD, bese uthatha isinqumo sokuthenga okuningi. Inkatho eyodwa yabiza ama-euro ayi-100,000. Ipayipi elilodwa liyi-0.0001 nge-EUR / USD.
Ngakho-ke, izindleko zepayipi elilodwa ngenkatho eyodwa zingama-100,000 x 0.0001 = 10 amaDola aseMelika.
Ake sithi uthenga i-EUR / USD ngo-1.12250 bese uvala isikhundla sakho ku-1.12260. Umehluko phakathi kwalezi ezimbili:
Ngamanye amagama, umehluko yipayipi elilodwa. Ngakho-ke, uzokwenza u- $ 10.
Iyini inkontileka ye-Forex?
Ake sithi uvule isikhundla sakho se-EUR / USD ngo-1.11550. Kusho ukuthi uthenge inkontileka eyodwa. Lezi zindleko zokuthenga zenkontileka eyodwa zizoba yi-100,000 yama-Euro. Uyathengisa Amadola okuthenga ama-Euro. Inani le Idola olithengisayo liboniswa ngokwemvelo izinga lokushintshana.
I-EUR 100,000 x 1.11550 USD / EUR = USD 111,550
Uvale isikhundla sakho ngokuthengisa inkontileka eyodwa ku-1.11600. Kuyacaca ukuthi uthengisa ama-Euro futhi uthenge amaDollars.
I-EUR 100,000 x 1.11560 USD / EUR = USD 111,560
Lokhu kusho ukuthi ekuqaleni uthengise ama- $ 111,550 futhi ekugcineni uthole u- $ 111,560 ngenzuzo kwama- $ 10. Ukusuka kulokhu, sibona ukuthi ukuhamba ngepayipi elilodwa evumele wena kukwenzile u- $ 10.
Leli nani lama-pips lifana nawo wonke amabhangqa e-forex acashunwe ezindaweni ezine zamanani.
Kuthiwani ngezimali ezingacashunwanga ezindaweni ezine zedesimali?
Imali enjalo ephawuleka kakhulu yiJen yaseJapan. Amabhuya wemali ahlotshaniswa ne-Yen ngokwesiko akhonjiswe izindawo ezimbili zamanani, futhi ama-pips e-forex alawo mabhangqwana alawulwa yindawo yesibili yedesimali. Ngakho-ke, ake sibheke ukubala ama-pips nge-USD / JPY.
Uma uthengisa i-USD / JPY eyodwa, ukuguqulwa kwepayipi elilodwa ngentengo kuzokubiza ama-1,000 XNUMX Yens. Ake sibheke isibonelo ukuze siqonde.
Ake sithi uyathengisa izinkatho ezimbili ze-USD / JPY ngentengo ye 112.600. Okuningi I-USD / JPY ngama-100,000 XNUMX amaDollar aseMelika. Ngakho-ke, uthengisa ama-2 x 100,000 US Dollars = 200,000 US Dollars ukuze uthenge ama-2 x 100,000 x 112.600 = 22,520,000 waseJapan waseJapan.
Intengo ihamba ngokumelene nawe, futhi unquma yehlisa ukulahleka kwakho. Uvala ngo-113.000. Ipayipi elilodwa le-USD / JPY ukunyakaza endaweni yesibili yendawo. Intengo ihambile 0.40 ngokumelene nawe, okuyi-40 pips.
Uvale isikhundla sakho ngokuthenga ama-USD / JPY amabili amaningi kuma-113.000. Ukuhlenga ama- $ 200,000 ngalesi silinganiso, udinga ama-2 x 100,000 x 113.000 = 22,600,000 waseJapan waseJen.
Lokhu kungu-100,000 Yen ongaphezu kokuthengisa kwakho kokuqala kwamaDollars, ngakho-ke unokushoda kwe-100,000 Yen.
Ukulahleka kwe-100,000 Yen kuma-pips angama-40 kusho ukuthi ulahlekelwe yi-80,000 / 40 = 2,000 Yen ngepayipi ngalinye. Njengoba uthengise izinkatho ezimbili, leli nani lepipi lingu-1000 Yen ngenkatho ngayinye.
Uma i-akhawunti yakho iphinda yenziwa ngohlobo lwemali olungeyona imali yesilinganiso, kuzothinta inani lepayipi. Ungasebenzisa noma ikuphi wokubala inani lamapayipi online ukunquma ngokushesha amanani wangempela wepayipi.
Ungasebenzisa kanjani ama-pips ekuhwebeni kwe-Forex?
Abanye bathi igama elithi "pips" ekuqaleni lisho ukuthi "Amaphesenti-ku-Point, "kodwa lokhu kungenzeka kube yindaba ye-etymology yamanga. Abanye bathi isho iProte Isikhombisi.
Iyiphi ipayipi ku-forex? Noma ngabe yini umsuka waleli gama, ama-pips avumela abathengisi bezezimali ukuthi bakhulume ngoshintsho oluncane ngamanani okushintshana. Lokhu kufana nokuthi isihlobo sayo silibeka kanjani iphuzu lesisekelo (noma i-bip) elenza kube lula ukuxoxa ngoshintsho oluncane ngamanani wenzalo. Kulula ukusho ukuthi ikhebula lasukuma, ngokwesibonelo ngamaphoyinti angama-50, kunokusho ukuthi lenyuke ngo-0.0050.
Ake sibheke ukuthi amanani entengo e-forex avela kanjani MetaTrader ukufanekisa i-bomba ku-forex futhi. Isibalo esingezansi sibonisa isikrini se-oda se-AUD / USD eMetaTrader:
Isilinganiso esikhonjiswe esithombeni sithi 0.69594 / 0.69608. Siyabona ukuthi izinombolo zendawo yokugcina eyedlula zincane kunezinye izinombolo. Lokhu kukhombisa ukuthi lezi izingxenyana zepipi. Umehluko phakathi kwentengo yebhidi nentengo yokunikezwa ingu-1.4 pips. Uma uthenge ngokushesha futhi uthengise ngaleli nani, izindleko zenkontileka zizoba ngu-1.8.
Umehluko phakathi kwama-pips namaphuzu
Uma ubheka isithombe-skrini esingezansi kwesinye i-oda, uzobona "Shintsha i-oda"iwindi:
Qaphela ukuthi engxenyeni ye Shintsha i-oda iwindi, kunemenyu yokudonsela phansi evumela ukuthi wena ukhethe inani elithile lamaphoyinti njengokumisa ukulahleka noma ukuthatha inzuzo. Ngakho-ke, kukhona i umehluko obalulekile phakathi kwamaphoyinti nepips. Amaphoyinti kuloluhlu olwehlayo abhekisele endaweni yesihlanu yedesimali. Ngamanye amagama, izingqimba ezihlangene ezakha ingxenye eyodwa kweshumi yenani lepayipi. Uma ukhetha Amaphoyinti angama-50 lapha, uzoba empeleni ukukhetha ama-5 pips.
Indlela enhle yokujwayela ama-pips ngamanani entengo ye-forex ukuthi Sebenzisa i-akhawunti yedemo ku Ipulatifomu yeMetaTrader. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuke futhi uhwebe ngamanani emakethe ngalezi zengozi zero, ngoba usebenzisa kuphela imali ebonakalayo ku-akhawunti yedemo.
Uma unesifiso sokuhweba ngamasheya, ungahle uzibuze ukuthi ngabe ikhona yini into efana nepay yokuhweba ngamasheya. Ngempela, akukho ukusetshenziswa kwama-pips uma kuziwa ekuthengisweni kwesitoko, njengoba kunemibandela esethiwe esetshenziswayo yokushintshwa kwezinguquko zamanani njenge-pence namasenti.
Isibonelo, isithombe esingezansi sikhombisa i-oda lesitoko se-Apple:
Izinombolo eziphelele kwisilinganiso zifanekisela intengo kumaDola aseMelika, kanti izinombolo zamasenti zimelela amasenti. Isithombe esingenhla sikhombisa ukuthi izindleko ze Ukuhweba ngamasenti ayi-8. Lokhu kulula ukusiqonda, ngakho-ke asikho isidingo sokwethula elinye igama elifana ne-pips. Noma kwesinye isikhathi i-jargon yemakethe ingafaka igama elijwayelekile njenge- "umkhaza" ukumela ukuhamba koshintsho oluncane kakhulu lwamanani alingana nesenti.
The inani lepayipi kuma-indices nakwezimpahla kungahluka kakhulu. Isibonelo, izinkontileka zikawoyela zegolide nezingasho lutho noma i-DXY zingase zingafani uma kwenzeka kwezimali noma kuma-CFD wesitoko. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba abale inani lepayipi ngaphambi kokuvula umsebenzi wokuhweba othile.
Manje kufanele wazi impendulo yombuzo othi "yini ipayipi ekuhwebeni kwe forex?". Ukujwayeza iyunithi yokulinganisa yokushintshwa kwamanani wokushintshaniswa kuyisinyathelo esibalulekile sokuba ngumhwebi ochwepheshe. Njengomhwebi, kufanele wazi ukuthi inani lama-pips libalwa. Lokhu kungakusiza uqaphele ubungozi obungahle bube khona kwezohwebo. Ngakho-ke, sethemba ukuthi lo mhlahlandlela ukukunikeze ulwazi oluyisisekelo ukuze uqale umsebenzi wakho wokuhweba.
Izihloko ezihlobene Ungakufunda kanjani amashadi we-Forex Kuyini ukusabalala e Forex Ukuhweba? Funda Forex Ukuhweba igxathu negxathu